अलबिदा डा. हरि सापकोटा! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ। – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/अलबिदा डा. हरि सापकोटा! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ।
नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण एक चिकित्सकको निधन भएको छ । कोरोना संक्रमित भई उपचार गराइरहेका भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ चिकित्सकको निधन भएको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले कोरोना संक्रमित भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ चिकित्सकको निधन भएको पुष्टि गरेका छन् ।
आइतबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा दुई साता अत्यावश्यक सेवामात्र